Manerantany: Ny Hijablogging Fashionistas · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 5:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, عربي, فارسی, English
(Marihina fa tamin'ny 16 Aprily 2009 no nanoratana ny lahatsoratra)
Tamin'ny volana Martsa 2009, nihaona tamin'ny ekipa vaovaon'ny “bilaogerahijab” izahay, ireo vehivavy izay misalotra hijab ary mibilaogy momba izany. Miparitaka manerantany ny bilaogera toy izany, ao ny mamahana bilaogy momba ny lohahevitra maro samihafa toy ny andraikitry ny ray aman-dreny, ny lamaody, ny dia ary ny politika. Ato amin'ity lahatsoratra ity isika hitsidika indray ny “hijablogosphere” (tontolon'ny bilaogy hijab) mba hamantatra ny vaovao.
Vaovao “hijabilaogera” mahafinaritra iray ny Hijabs High, rakitsarin'ny vehivavy mitafy hijab manerana izao tontolo izao. Antsoin'ny bilaogera hafa hoe “Miozolomana Sartorialista”, Mivaky toy izao andininy “momba” ilay bilaogy :
To the chic gang of Hijabs High photographers – you know who you are – thanks for doing it all with grace and panache. 🙂
Nahazo ny aingam-panahin'ny vondrom-piarahamonin'ny vehivavy Miozolomana mahay mihaingo sy mavitrika manerantany ny Hijabs High izay mampifangaro ny mari-panondroana azy ireo ary mametraka ny toerany eo amin'izao tontolo izao isan'andro amin'ny alàlan'ny hatsaran-tarehy sy ny lamaody.
Manantena aho fa hanome aingam-panahy, fandrisihana sy fankaherezana ny Miozolomana sy ny tsy Miozolomana ity bilaogy ity mba hijery indray ny “endriky” ny vehivavy Miozolomana misalotra voaly sy mandrisika antsika rehetra mba ho mahafinaritra kokoa.
Ho an'ny ekipa mpaka sarin'ny Hijabs High mahafinaritra, fantatrareo hoe iza ianareo. Misaotra noho ny fanaovana izany rehetra izany tamin'ny fahasoavana sy ny fanasongadinana 🙂
Farany, ananan'ny The Sartorialist trosa ny Hijabs High, izay nanampy voalohany tamin'ny fifantohan'ny fakantsary tamin'ny andavanandro. Misaotra anareo.
Namoaka lahatsoratra an-tsary vao haingana momba ilay mpamorona lamaody Egyptiana Reham Farouq, mpamolavola manokana ho an'ireo misalotra ny hijab ny Hijabi Style, bilaogin-damaody iray hafa. Namoaka lahatsoratra mitovy amin'izany vao haingana momba an'i Farouq ny Hijabilaogy , izay nahazo fanehoan-kevitra maro midera ilay akanjo.
Farany fa tsy ny kely indrindra tamin'ny dian'ny “hijabilaogy” androany dia nisy ny lahatsoratra lehibe avy amin'i Nuseiba, izay manana bilaogy mikendry ny hanamafy sy hanome fanazavana momba “ireo feo marobe sy ny traikefan'ny vehivavy Miozolomana.” Nanoratra ilay bilaogera tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Nahoana no mila manomboka amin'ny fitiavana ny hijab ny feminista, ” :
Sendra izany aho rehefa namaky ny vaovao io maraina io. Toa niteraka adihevitra nasionaly tao Norvezy ny hijab . Nanomboka izany rehefa nisy vehivavy Miozolomana nangataka ny hanao hijab niaraka tamin'ny fanamian'ny polisy. Ary nanomboka teo dia nitotongana ny zava-nisy rehefa nisy vehivavy Miozolomana iray hafa nandoro ny hijab tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy. Oay! tsy tianao ve ireo feminista liam-pandrosoana ! Haingana izy ireo manofahofa ny mosoara ho an'ny feminisma, kanefa aleo mahita ny atidohan'ny vehivavy Miozolomana miparitaka eny amin'ny rindrin'ny tranony toy izay mahita azy ireo voafandrika ao anaty hijab!